Etu esi eji ngwa egwu agbanwe ụwa | Martech Zone
Etu esi eji ngwa egwu agbanwe uwa
Wednesday, September 4, 2013 Sunday, October 4, 2015 Douglas Karr
Anyị dere banyere ngwa mkpanaaka na ihe kpatara ha ji dị iche. N'adịghị ka desktọọpụ nke na-enye ọtụtụ ọrụ, ngwa mkpanaka na-enwekarị uche nke onye ọrụ ya. Ngwa ngwa ngwa na-enyekwa ahụmịhe onye ọrụ dị iche iche. Ọtụtụ puku ndị ọrụ ebudatara ma na-etinye aka na ngwa anyị iPhone na Droid na stats di iche iche mgbe ha biara oru ha.
Maka ụlọ ọrụ nkezi, iwulite ngwa abughi nhọrọ n'oge gara aga - na-efu ọtụtụ iri puku dollar. Agbanyeghị, nyiwe nke ngwa amalitela ma budata ma akwụ ụgwọ agbadaala. Ọ dịghị mkpa ka ị nweta ngwa etinyegoro na ncha ọzọ. Ndi mmadu wuru ngwa anyi, Postano, nwee ngwụcha ngwụcha nke nwere ike ịnabata usoro ịhazi ọdịnaya ọ bụla yana njedebe ihu nwere ike ịhazi mma gị maka mkpa gị. Ha na-arụ ọrụ dị ịtụnanya - nchịkọta ha nke nyiwe na teknụzụ sitere na ngwaọrụ mkpanaka gaa na ngosipụta oge ọhụụ nke nwere ike ikpuchi mgbidi niile. Ndị Cool!
a ozi sitere na Ngwa ngwa na-enye onu ogugu ndi mmadu banyere nkesa na ojiji. Emela gụpụta ngwa nke ekwentị gị ma ọ bụ mgbasa ozi na nke ọzọ. Ha bu ezigbo nyiwe maka mmekorita na olile anya gi!
Ike dị iche iche nke Ndu Akara
Sep 5, 2013 na 6: 42 AM
Daalụ maka ozi infographic a. Ọnụ ọgụgụ ndị a na-egosi n'ụzọ doro anya ihe ndị dị ugbu a ma a bịa na nkesa na ojiji, yabụ ọ dị mkpa maka ụlọ ọrụ ndị nwere mmụba ịgbasa mmetụta ha na ikpo okwu a. O juru m anya ịhụ ọtụtụ ngwa izi ozi nwere ọtụtụ ndị ọrụ karịa Skype.